URobert Louis Stevenson. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Izincwadi zakhe ezingafi | Izincwadi Zamanje
Sezigcwalisekile manje Iminyaka engu-123 ngemuva kokushona kuka Umlobi waseScotland uRobert Louis Stevenson esiqhingini saseSamoa. Isifo sofuba samthatha eneminyaka engama-44, kodwa waphila kakhulu futhi nezigigaba eziningi njengalezo azilandisa kumanoveli akhe. Kuyinto futhi isazohlala omunye wabalobi abathandwayo nabathandekayo wezwe.
Treasure Island, The Black Arrow, The Strange Case kaDkt Jekyll noMnu Hyde, noma obunye bobuthakathaka bami okuyi INkosi yaseBallantrae… Izihloko sonke esizifundile noma esizibonile ekuvumeleni amafilimu, izinganekwane zabo kanye nezindaba zabo sezivele azifi. Ngibukeza ezinye zazo njengenkokhiso ethobekile kumlobi we-adventure odume kakhulu emhlabeni we-Anglo-Saxon.
1 Isiqhingi samagugu
2 Izindaba zaseScotland
3 Indoda emnyama
4 Umcibisholo omnyama
5 Icala Elixakile likaDkt Jekyll noMnu Hyde
6 Usathane osebhodleleni nezinye izindaba
7 INkosi yaseBallantrae
Ishicilelwe eLondon ngo-1883. ULong John Silver, uJim Hawkins, uCaptain Flint, uBilly Bones, uBlack Dog, uBen Gunn, uKnight Trelawney, uCaptain Smollet U-Hispaniola… Amagama ahlala unomphela kwimemori yethu yokufunda. Enye yezinkumbulo zami zokuqala zale noveli kuvela ukuthi ngifunde esinye sezingcezu zayo, inkhulumomphendvulwano noBen Gunn, esivivinyweni sokuqondisisa ukufunda kwezinye izivivinyo zengqondo esazinikezwa esikoleni.
Kamuva abaningi abaningi bangijoyina kusukela ngiyifundile zezingane, ezabantu abadala, ezesiNgisi, futhi njengoba zikubonile kuzinguquko eziningi noma opopayi. Indlela yami esondelene nokuhlelwa kwayo, amasonto amane engihlale eBristol ehlobo elilodwa ngizama ukuqagela ukuthi ikuphi indawo yokuhlala izivakashi U-Admiral Benbow o I-Spyglass, UJohn Silver's Tavern. Indaba ye-adventure yaphakade.
Izindaba ezinhlanu ezibekwe eScotland zihlanganiswa ndawonye kulo mqulu.
Isela lomzimba igxile ezinsukwini zokuthuthukiswa kwe-Anatomy njengesayensi, lapho amakilasi ayedinga izidumbu, futhi izigebengu ezingathembekile zaziphanga amathuna.
I-janet egwegwile Yindaba yokuthakatha nokuba nempahla, futhi ilandisa ngokuhlukunyezwa okwenziwa umpristi omkhulu wasesifundeni saseScotland, obambelele ezinkolelweni ezindala.
En Amadoda Ajabulayo isenzo sibekwe ogwini olusenyakatho yeScotland, futhi sisitshela ukufunwa kwengcebo yomkhumbi ophahlazekile womkhumbi waseSpain.
Indlu engaphansi yesifo Kusiyisa egumbini elingaphansi lapho kuhlala khona ububi bendalo engaziwa.
Inkundla yezixhumanisi lapho umthengisi olandelwa yiCarbonari yaseNtaliyane ofuna isizumbulu kuye ebalekela isithabathaba somuzi lapho avinjezelwe khona.
Le ndaba emfushane ibhekwa njengomunye wobuciko bakhe, kepha akwaziwa kangako ngenxa yobunzima bokuyihumusha ngoba ibhalwe ngolimi lwaseScotland. Kumnyama kakhulu ngaleyo ndawo yasemakhaya uStevenson ayazi kahle futhi nokuthi lezo zimbi zenziwa kuphi izilingo zabathakathi.
Yashicilelwa ekuqaleni njengencwajana ngawo wonke u-1883 I-england yangeNkathi Ephakathi kwenzeka ngesikhathi Impi yamaRoses Amabili obekufaka izindlu zaseLancaster naseYork umqhele wezwe. Uxoxa indaba ka UDick shelton, othi, ngemuva kokubalekela ababulali bakayise, athole isiphephelo phakathi kwezigebengu ze inkampani yomcibisholo omnyama, ozomsiza ekuziphindiseleni.
Icala Elixakile likaDkt Jekyll noMnu Hyde
Lona inoveli emfushane ngomunye wemisebenzi yakhe emikhulu nalapho uStevenson abhekane khona nesihloko esimgxile empilweni yakhe yonke: ubumbili bemvelo yomuntu. Wambeka enhliziyweni ka Victorian london futhi kuwuchungechunge lobufakazi obuvela kofakazi abehlukene inhloso yabo ukwembula imfihlakalo. IJekyll neHyde bayinhlangano ehlukaniswe kabili. UHyde ubuntu obusabekayo bukaJekyll futhi ufanekisela ububi bokuzicindezela, okuthi, uma sebekhululiwe, angakwazi ukubulawula. Futhi kimi uJekyll noHyde bazohlala benobuso balelo silo sebhayisikobho esasikhona Spencer tracy.
Usathane osebhodleleni nezinye izindaba
Lokhu kuhlanganiswa kwe- izindaba ezinhlanu kufaka phakathi Abaphuca umzimba; UMarkheim, que kuyisifundo esingokwengqondo somzabalazo phakathi kokuhle nokubi; Olala Kuyindaba yothando enesihloko se-lycanthropy ngemuva; Ibhishi laseFalesá Kuyindaba ye-adventure enokubukeka kokuqonda futhi Usathane osebhodleleni ibuyisa inganekwane engokomfanekiso eSouth Seas.
Enye yezincwadi eziqhakazile kakhulu. Waqala ukuyibhala ngo-1887 edolobheni elisemngceleni we-United States neCanada, wayiqeda eminyakeni emibili kamuva eWaikiki, isiqhingi esibalele eSouth Seas. Le noveli, ethonywe impilo yokuhamba kukaStevenson, inwebisa izilungiselelo ezahlukahlukene, imihlaba, iminyaka namazwe.
Indaba yamadodana amabili weNkosi uDurrisdeer, kulabo ababhekene nokudalelwa, ezombusazwe nothando, kwadingeka ukuzivumelanisa kwayo nefilimu okudume kakhulu kwifilimu yango-1953 Kudlala u-Errol Flynn, enye inganekwane yokuzidela okuhle kwesikrini esikhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » URobert Louis Stevenson. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Izincwadi zakhe ezingafi